Siyaaradii Fiqi Cummar iyo Owlaadiisa oo lagu qabtay Stockholm
Monday January 25, 2016 - 12:58:57 in Wararka by Super Admin
Waxaa Magaalada Stockholm ee wadanka Sweden Malintii shalay ahayd ka dhacday siyaaradii Fiqi Cummar iyo Owlaadiisii oo ay ka midyihiin sheekh Loobage iyo Sheekh Qudub Siyaarada oo Sanad walba ka dhacda Daafaha Caalamka Gaar ahaan wadamada ay ku noolyihiin Ubadka Fiqi Cumar ayaa waxaa Sanadkaan si weyn uga soo qeyb galay Mashaa,ikh waaweyn oo farabadan.
Siyaarada ayaa waxaa looga kala yimid Daafaha Magaalada Stockholm iyo waliba Gobolada iyo Londan Xaflada oo habeynkii Jimcaha ahayd Bilaabatay ayaa waxaa Culumada ku Subciyeen Qur,aanka Kariimka ah ayada oo sidoo kale Qasidooyin iyo waliba Muxadarooyin Diini ah halkaasi looga soo jeedinayay Dhamaan dadkii ka soo qeyb galay.
dadkii ka soo qeyb galay oo isugu jiray Culumo,Odayaal ,Dhalin yaro,Haween iyo Caruur ayaa waxaa dhamantood ay aad ugu faraxsanyeen habka ay culumadu uga haqab tireyso Diinta ayada oo sidoo kale culumada halkaasi isugu timid bulshadii nasiibka u yelatay in ay Siyaarada ka soo qeyb gasho Uga shekeeyeen Doorkii Caalamka weyn Sheekh Loobage uu Diinta islaamka Garsiinteeda Bulshda soomaaliyeed uu ka Qaatay.
Sheekh Loobage ayaa ahaa sheekh dhamaan dhulka soomaaliya laga tix galyo ayada oo Dacwada islaamka ka fidin jiray Guud ahaan dalka soomaaliya. waxaana shiikha allaha u naxariistee uu waqtigiisa siiyay Fidinta diinta islamka.
Waxaana Habkii uu diinta islaamka ugu fidiyay dalka soomaaliya ay ka dhigtay shiikha mid si weyn ay jiil walba jiilka ka sii danbeeya ay u Garanayaan Tariikhdiisa Wanagsaneed ayada oo shiikhu iminka ku aasan yahay Gobolada waqooyi Galbeed ee la magac baxay soomaaliland.
Waxaana Siyaarada xalay saqdii dhaxe ku soo idlaatay jawi farxadeed waxaana culumada halkaasi isugu yimid ay u duceyeen dhamaan Umadaha islaamka ayaga oo gaar haan u duceeyay umada soomaaliyeen iyo Dadkii Siyaarada sheekha u istaagay in ay dhigaan ayada oo Khitaamkana lagu soo xiray siyaarada Qasiidooyin aad umacanaa.